ဂျပန်လက်ရေးလှရေး (Shodo) | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ဂျပန်လက်ရေးလှရေး (Shodo)
အရှိဆုံးယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ပင်ဂျပန်လက်ရေးလှရေးသို့မဟုတ် Shodo နှစ်ပေါင်းရာချီကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါတဲ့အနုပညာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Shodo တိုက်ရိုက် “အရေးအသား၏လမ်း” ကိုဘာသာနှင့်ဖြီးနှစ်ပြီးသောတစ်ဦးမှင်ကို အသုံးပြု. ဇာတ်ကောင်ရေးသားခြင်း၏အစဉ်အလာလမ်းဖြစ်၏။
Shodo Concepts များနှင့်ဝေါဟာရ:
Fude Brush ဝါးနှင့်မြင်းဆံပင်လုပ်ထားတဲ့:
Sumi Black ကမှင်
အနောက်တိုင်းပရိသတ်တွေနားမလည်စေခြင်းငှါ၎င်းမှင်တစ်ခုခုဖန်တီးရန်အသုံးပြုမှင်သောကျောက်ကစကားများရေးသားဖို့တစ်ဦးမှင်စုတ်သို့မဟုတ်fude သုံးပြီးတစ်ဦးကလောင်အမည်သို့မဟုတ်ခဲတံကို အသုံးပြု. ရေးသားဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်ကာလတွင်ဖြစ်ပါသည် သို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများစုံလင်ဖို့လေ့လာနေ၏နှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်းပါဝငျသညျ။ ဒါဟာလူတစ်ဦးစီတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်အနည်းဆုံးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက် ” ဆေးသုတ် ‘နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို’ ‘ဆေးသုတ်’ ‘ဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်မှကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်တူညီတဲ့စကားလုံးလိုကြောင်းသိရသည်။
သင်ကနေအိမ်မှာလုပျနိုငျသညျ့ Shodo ပန်းချီ:
1. အနက်ရောင်ဆေးသုတ်, စက္ကူအဖြူအပိုင်းအစ, သတင်းစာစာမျက်နှာများနှင့်ကြီးမားသော paintbrush စုဝေးစေ။ မဆိုကြီးမားသောဆေးသုတ်ဖြီးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အစဉ်အလာဖြီးဝါးနှင့်မြင်းဆံပင်ထဲကကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
2. သင်ပန်းချီရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုအွန်လိုင်းဂျပန်စာလုံးများကိုကြည့်ပါ။ ငါသည်လည်း http://web-japan.org/kidsweb/virtual/shodo/shodo03.html နှင့်အတူချွတ်စတင်ရန်အွန်လိုင်းဥပမာနှင့်ကောင်းတစ်က်ဘ်ဆိုက်ထုတ်စစ်ဆေးလိမ့်မယ်။
3. စက္ကူအောက်မှာသတင်းစာချထားပါ။ သတင်းစာနှင့်စက္ကူချတိပ်တူအချို့က။ အစဉ်အလာ, ထိုသူတို့စာရွက်ထိပ်မှာ bunchin သို့မဟုတ်အလေးနှင့်အတူဆင်းကျင်းပခဲ့ကြသည်။
သငျသညျထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် 4, သင်ဖြောင့်တက်ထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်၏ခြေကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအပြားဖြစ်သင့်, သင်လုပ်နိုင်လျှင်သင့်ရဲ့ပြန်ကုလားထိုင်မထိသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာရပ်တည်မှုဆေးထိုးခြင်းမှအဆင်ပြေမယ့်, ဒါပေမယ့်ရိုးရာ Shodo ပန်းချီအနုပညာရှင်ထိုင်လျက်ခဲ့သည်။ သင့်အခြားလက်နေဆဲစာရွက်ကိုင်ကူညီသင့်ပါတယ်။
5. Now ကိုကဖြီးတက်ကောက်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ အဆိုပါဖြီးပုံမှန်ကလောင်သို့မဟုတ်ခဲတံများကဲ့သို့ကျင်းပမပေးပါ။ ဒါဟာဖြောင့်အနေအထား၌သင်တို့၏လက်မ, လက်ညှိုးနှင့်လက်ခလယ်အကြားကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်မရွေးစက္ကူမထိသင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့လက်စွပ်ကိုလက်ညှိုးနှင့်သင့်လက်ပေါ်မှာအနားယူရပါမည်။
သငျသညျဆေးထိုးခြင်းမပြုမီ 6. သင့်ရဲ့ဖြီးနှင့်အတူလေထဲတွင်သင့်ရဲ့ဆေးသုတ်လေဖြတ်လေ့ကငျြ့။ ဂျပန်ဇာတ်ကောင်နှင့်တကွ, လေဖြတ်ခြင်းအလို့ငှာအရေးကြီးပါတယ်နှငျ့သငျစတငျမတိုင်မီသင်လေဖြတ်ခြင်းအလို့ငှာသိကြသင့်ပါတယ်။ သင့်အွန်လိုင်းဥပမာသင်သည်သင်၏လိုင်းများသို့မဟုတ်လေဖြတ်ဘာလုပ်သင့်သောအရာကိုအမိန့်ကိုရှင်းပြသင့်တယ်။
7. အခုတော့ပန်းချီဖို့အချိန်ပဲ! ဒီကသင်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Shodo လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်လိမ့်မယ်။ စိတ်အေးလက်အေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ချောမွေ့စွာအသက်ရှုယူပါ။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေဖြတ်ကိုရပ်တန့်မနေပါနဲ့ – ကဆေးသုတ်သည့်ဖြီးပယ်ကျရောက်လမ်းကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ အဲဒီအစားအားလုံးသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုသည်အထိသွားစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါဟာနောက်ကျောကိုသွားနှင့်သင့်လေဖြတ်ပြီးဆုံးကြသည်တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့လက်ရေးလှသို့မဟုတ်ပန်းချီ ” တက်မထိ ‘ဖို့ရိုင်းစိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
8. ထပ်ခါတလဲလဲသင့်ရဲ့လက်ရေးလှပန်းချီနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်အထိပါပဲ။ သငျသညျအဖြီးလှုပ်ရှားမှုခံစားခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအလို့ငှာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်တိုင်အောင်အကြိမ်အနည်းငယ်ယူပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောခက်ခဲဂျပန်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူနောက်တဖန်ထိုအခြေလှမ်းများကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ အခုအသစ်လှုပ်ရှားမှုကြိုးစားနေတဲ့အခါသင်ကူညီရရှိနိုင်အများအပြားစာအုပ်များနှင့်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။
1. ဂျပန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်ကျောင်းမှာဘာသာရပ်အဖြစ် Shodo သင်ယူ – သင်လက်ရေးအတန်းစဉ်အတွင်းပြုအံ့လိုပဲ။ သို့သော်ဤတန်းသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုကဲ့သို့ငယ်ရွယ် စတင်. အပတ်စဉ်အတန်းထဲတွင်မကြာခဏလေ့ကျင့်နေပါတယ်။ သူတို့ Shodo သို့မဟုတ်လက်ရေးလှရေးကျွမ်းကျင်မှုစုံလင်နိုင်အောင်တချို့ကကလေးများပင်နေ့လယ်ကလပ်သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေသင်တန်းများတက်ရောက်ရန်။
2. Shodo အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်နိုင်ရန်အတွက်, သင်အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အကြီးတန်းကျောင်းခက်ခဲ Shodo သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းနောက်, သင်တက္ကသိုလ်လက်ရေးလှရေးနှင့် Shodo လေ့လာဖို့ရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အတော်များများကပညာရှင်များသူတို့အခြေခံ retaught သူတစ်ဦးမာစတာခဲ့ပြီးနောက်လေ့လာနေသူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့စတင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြသည်။
3. လက်ရေးလှရေးသို့မဟုတ် Shodo ပြိုင်ပွဲမကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာကြပါပြီ။ ထိုင်နေစဉ်မယ့်အစားပန်းချီ၏, ကျောင်းသားများအုပ်စုများ – များသောအားဖြင့်မိန်းကလေးငယ်များ – ဂီတပြဇာတ်စဉ်အပြုသဘောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပဲရေးတတ်တယ်။ ရမှတ်သူတို့ဆေးထိုးခြင်းကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းအပေါ်အခြေခံပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်လျှောက်လုံးပေးထားပေမယ့်လည်းသူတို့ကဂီတကိုလုပ်ပုံကိုကောင်းစွာနှင့်မည်မျှခုန်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။ အဆိုပါတီထွင်ဖန်တီးမှုသည်သင်၏အသေးပုံမှန်အနုပညာဖြီးထံမှအတူဆေးထိုးခြင်းမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောမိန်းကလေးများလိုအပ်သည့် mops ဤပြိုင်ဆိုင်မှုအကွာအဝေးများအတွက်ဆေးသုတ်စုတ်တံအဖြစ်အံ့သြဖွယ်ပါ! သငျသညျစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင် Shodo မိန်းကလေးများ Watch!
4. အတော်များများဆာမူရိုင်းစစ်သူရဲတစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့စစ်သည်တော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမခံရမီ, ဒီလက်ရေးလှပန်းချီအတွက်ဆုံးမသွန်သင်ဖို့လိုပါတယ်အဖြစ်တခြားသူတွေလိမ့်မယ်။ သည်အခြားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများရိုးရာလက်ဖက်အခမ်းအနားနှင့်ပင်ပန်းပွင့်တဦးတည်းစစ်သားတစ်ယောက်သင်တန်းအားလုံးဒေသများရှိအရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားမီမှန်ကန်စွာစီစဉ်ဖျော်ဖြေခြင်း, ပုလွေကစားပါဝင်သည်။
ဂျပန်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလေဖြတ်အမိန့်ရှိသော်လည်း 5. သူတို့သည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာဖတ်နေတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့လမ်းရှိသည်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့စာမျက်နှာများကိုညာဘက် left ဖတ်ပါ။ ဂျပန်မှာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်ရှုဖို့လမ်းကိုလက်ဝဲမှလက်ယာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာစာမျက်နှာကိုဖြတ်ပြီးရေးဖို့တူညီသောလမ်းပါ!
6. သင်ဝေါဟာရအပိုင်းကနေသတိရနေလျှင်, ဂျပန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဇာတ်ကောင် (သို့မဟုတ်အက္ခရာစဉ်) နှစ်စုံကိုသင်ယူဖို့ရှိသည်ဟိရဂဏနှင့်ရာတွင်ခန်းဂျီးကိုခေါ်။ ဂျပန်ကျောင်းသူကျောင်းသားများလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်နောက်ထပ် set ကိုခတခဏဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဇာတ်ကောင်သာ ” အနောက်တိုင်း ” စကားလုံးများကိုဘာသာပြန်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ အက္ခရာစဉ်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအစုံသင်ယူမြင်ယောင်ကြည့်ပါ!
7. Shodo ဝတ္ထု Mieko နှင့်ပဉ္စမရတနာအတွက်အရေးပါသော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Elenor Coerr ဖွငျ့ဤဇာတ်လမ်းကိုလူငယ်တစ်ဦးလက်ရေးလှချစ်သောသူမိန်းကလေး, ဒါပေမယ့်သူမဟာတော့ဘူးပန်းချီမနိုင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်အောက်ပါအတိုင်း။ ဤဇတ်လမ်းသူမကရေးသားခြင်းနှင့်နောက်တဖန်ပန်းချီကြိုးစားရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့ဘယ်လိုပြောပြသည်။
8. Shodo အစဉ်အလာနှင့်ဂျပန်ရိုးရာပုံပြင်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကဂိမ်းက Playstation 2, Playstation3နဲ့ Wii အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာ Okami ခေါ်သင် name ကိုမျှဝေသူဂျပန်ဝံပုလွေဘုရားအဖြစ်ကစားပါတယ်။ Okami ဂျပန်ဖန်တီးသူဘုရားသည်နှင့်သင်သည်သင်၏ fude အမြီးသုံးပြီးဖြစ်တည်မှုသို့လက်ရေးလှများနှင့်အခြားရေးဆွဲ ‘ဆေးထိုးခြင်း’ ‘။
9. အတိအကျ Shodo, လက်ရေးလှ၏အလားတူစတိုင်ဂျပန်ကနေလူကြိုက်များနေသည်မဟုတ်ပေမယ့်။ Sumi သို့မဟုတ် drawing ပန်းချီဆရာများတစ်ခုတည်းဖြီးလေဖြတ်တစ်ဦးနဂါး၏ကိုယ်ကိုဆေးထိုးခြင်းမှလက်ရေးလှ၏သူတို့ရဲ့အသိပညာကိုအသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဆေးကြောပါ။ နဂါး၏ဦးခေါငျးကိုပထမဦးဆုံးခြယ်သနေသည်, သို့သော်နဂါး၏ကျန်တဦးတည်းတစ်ခုတည်းလေဖြတ်နှင့်အတူခြယ်ဖြစ်ပါတယ် – သူကပြည့်စုံမီဦးတည်ချက်, loops, ငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်ဇာတ်ကားပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်ပါတယ်ရာ။ ဒါဟာ Youtube ကိုအပေါ်ဗီဒီယိုများထွက်စစ်ဆေးနေကျိုးနပ်သည်။
10. A ကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းသယံဇာတသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Shodo ခရီးကိုဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင် http://shodo-japan.com/ မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ဒါဟာသင် Shodo လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပျတဲ့နည်းစနစ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလေ့လာသင်ယူကူညီရန်အွန်လိုင်းလဲ tutorial နှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအစဉ်အလာလက်ရေးလှပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူများအတွက်အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒီ website ဂျပန်အခြေစိုက် – ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဖြစ်ပိုမိုနီးကပ်စွာ Shodo အလုပ်ရုံများအတွက်အွန်လိုင်းကိုကြည့်!
MaikoyaSHODOShujimaikoya အိုဆာကာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုဂျပန်ထုံးတမျးစဉျလာMaiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်ဂျပန်လက်ရေးလှရေး